चौंथो संस्करणको एभरेष्ट प्रिमियर लिग आजबाट : विजेतालाई ५० लाख - Kantipath.com
चौंथो संस्करणको एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल)टी-ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट सुरु हुँदैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा हुने ईपीएलमा साविक विजेता ललितपुर प्याट्रीयट्स र काठमाडौं किङ्स -११ ले उद्घाटन खेल खेल्ने छन्। उक्त खेल अपराह्न सवा १२ बजे सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले ५० लाख प्राप्त गर्नेछ। यस्तै उपविजेताले १५ लाख पाउने जनाएको छ।
ललितपुर कुशल भुर्तेल र काठमाडौं सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा मैदानमा उत्रनेछ। दुबै टीममा चर्चित विदेशी खेलाडीको उपस्थिति रहनेछ। काठमाडौं किङ्स -११ मा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफ्रिदी, अफगानिस्तानका रहमान उल्लाह गुर्बाज लगायकका खेलाडी रहेका छन् भने ललितपुरमा श्रीलंकाका ओशाडा फर्नान्डो, सनदुन विराकोडी, अफगानिस्तानका आजमतुल्लाह ओमरजाई, इंग्ल्यान्डका एलेक्स ब्लाके लगायतका खेलाडी रहेका छन्।
चौंथो संस्करणको प्रतियोगितामा विभिन्न ६ वटा फ्रेन्चाइजी क्लबबाट २४ जना विदेशी खेलाडी खेल्दैछन्। श्रीलंकाबाट सबैभन्दा धेरै आठ खेलाडीले ईपीएल खेल्दैछन्। पाकिस्तानका पूर्वकप्तान शाहिद अफ्रिदी कीर्तिपुरमा देखिने सबैभन्दा हाइप्रोफाइल क्रिकेटर हुनेछन्। बंगलादेशका एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय कप्तान तमिम इकबाल, श्रीलंकाका पूर्वकप्तान उपुल थरङ्गालगायत क्रिकेटरको खेल पनि हेर्न पाइनेछ।
Previous Previous post: सबै स्थायी समिति सदस्य डेढ लाख सदस्य बनाउन सक्नुहुन्छ ? म तयार छु : प्रभाकर
Next Next post: ६४ जिल्लामा आजदेखि कांग्रेसको पालिका अधिवेशन
५० लाख र उपाधीका लागि ईपीएल फाइनलमा भिड्दै पोखरा र चितवन
नेपाल VS केन्या (लाइभ)
एसिसी यु–१९ एसिया कप क्रिकेट छनोट प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीको घोषणा
सन्दिप लामिछाने र सोमपाल कामी क्यानडा जाँदै !
सन्दीपको पारिश्रमीकमा १४ गुणा वृद्धि,सीपीएल खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगे